‘झोला र झण्डा नबोक्ने म परदेशीले देशमा काम पाउँछु त प्रधानमन्त्रीज्यू ?’ | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
(July 31, 2021)
‘झोला र झण्डा नबोक्ने म परदेशीले देशमा काम पाउँछु त प्रधानमन्त्रीज्यू ?’
साउन १, २०७८ शुक्रबार १६:३७:४९ | नारायण कोइराला
नयाँ प्रधानमन्त्री पाएको छ देशले । प्रधानमन्त्रीलाई बधाई । नागरिकले के पाउँछन् त्यो पछिको कुरो हो । यस अघि के भयो भनेर बताइरहनु पर्दैन ।
यो पालि पनि हामी परदेशी श्रमिकका लागि केही होला भनेर आस गर्दिन । पहिलो पटक जोस र जाँगरका साथ प्रधानमन्त्री भएको भए पो केही नयाँ पन आउला भनेर आस गर्नु । उही पुरानो अनुहार, उही पुरानो बाटो , उही लक्ष्य । देशको अवस्था देख्दा परदेशमा बसेर मनमा अनेक प्रश्नहरू खेलिरहन्छ ।
कस्तो अवस्था प्रत्येक पल्ट कुनै परिवर्तन नहुने, सरकार बदलिने अनुहार नबदलिने, आलोपालो घुमीफिरी कुर्ची उही अनुहारले पाउने, नागरिकमा न कुनै आस रहने न निराशा, आस गर्नलाई केही आधार हुुनुपर्‍यो नि । हामी नागरिक त शून्यमा छौँ ।
अर्को पक्ष जो आफैंलाई युवाको ट्याग झुन्ड्याएर वर्षौँदेखि अधिकार खोज्दै आएको छ । जुन समयमा अगाडि बढ्नु पर्ने हो, बोल्नु पर्ने हो त्यो समयमा मौन बसेको देख्छु ।
यी सबै कुरा सोध्न मन लाग्छ । तर हामी परदेशीको त्यत्रो हैसियत कहाँ र । हाम्रो कुरा कसले सुन्छ र । दुई तिहाइको मतको त कुनै अर्थ रहेन भने हामी जस्ताको आवाज त हावामै हराउँछ । तर पनि आफ्नो मनको कुरा राख्न त पाउनु पर्‍यो नि । हामीले गणतन्त्रमा पाएको भनेकै यही त हो ।
पसिना खलखलती बग्दा जति सक्यो चाँडो देश फर्कन मन लाग्छ । जुन गन्जागोल,जालझेलको राजनीतिले देशमा अन्यौलता ल्याएको छ, यस्तो अवस्थामा देश गएर के गर्ने? परदेशी हामी सोच्न सक्दैनौँ । किनकि हामी त्यसको उत्तर नै भेट्दैनौँ ।
न त कुनै पार्टीको झोला बोकेको छु, न त झण्डा । आजभोलि झण्डा र झोला नबोकी काम पाइँदैन । बिदामा घर गएर दुई महिना बस्दाको अनुभवले मलाई तर्साउँछ । सानो कामका लागि पनि कति दुःख गर्नुपर्छ । म यहाँ बसेर त्यो क्षणको कल्पना समेत गर्न सक्दिन ।
म पनि देशको नागरिक हुँ । पार्टी भन्दा देशको उन्नति प्रगतिको कामना गर्छु ।
जो देशमा अवसर नपाएर, देश छाडेर कमाउन खाडीमा पसिना बगाउँदै छु । देशमा भएको भए झण्डा बोक्थेँ होला, जिन्दाबाद र मुर्दावादका नारा लगाउँथे होला । तर अहिलेको अवस्थामा न त त्यसको कुनै अर्थ रहन्थ्यो, न कुनै परिणामको आस । सरकार बदलिनु कुनै ठुलो कुरो होइन । गणतन्त्रले दिएको गणितीय आधार पनि होला, यस्तो भइरहन्छ । तर अहिलेको यस्तो गणितीय आधार हुँदा पनि यस्तो अवस्था आउनु दुर्भाग्य नै हो । म गणतन्त्रको राम्रो पक्ष हेर्न चाहन्थेँ । तर यहाँ राम्रोभन्दा नराम्रो पक्ष बढी क्रियाशील भएको देखियो ।
म शब्द मात्र बुनेर पत्र लामो गर्न तिर लागिन । आशा थियो ,“घाम अस्ताउँदा चन्द्रमा आएर उज्यालो दिने छ, तर त्यो भएन, चन्द्रमामा पनि ग्रहण लाग्यो, ग्रहणको अगाडि ताराहरुको के अर्थ?“
मेरो आशा दिनभरि घाम लागोस्, घाम अस्ताउँदा चन्द्रमाको उज्यालो छाओस्, हामी दिनरात अँध्यारोमा बाँच्न नपरोस् ।
पाल्पाका नारायण कोइराला अहिले खाडीको देश यूएईमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।
कर्णालीमा जीप खस्दा दम्पती बेपत्ता
साउन १५, २०७८ शुक्रबार
विपद्को आकलन गर्न नसके आउँदाे दशक भयावह हुन सक्छ : सांसद
आयाेगकाे निर्णयविरुद्ध महन्थ ठाकुर सर्वोच्चमा
अलमुताइरी–नेम्वाङ विवादबारे छानबिन गरिदिन मन्त्रालयलाई एन्फाक...
नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट राख्ने प्रक्रिया रद्द, अब फेरि नयाँ प्र...
३३ किलाे सुन काण्डमा फरार 'भाेजे मामा' गाैशालाबाट पक्राउ
चैतभित्र सबै नागरिकलाई खाेप लगाइन्छ : स्वास्थ्य मन्त्रालय
तपाईँले पैसा लिइरहेकाे भिडियाे मसँग छ भन्दै प्रहरीलाई 'ब्ल्या...
ऊर्जा मन्त्री भुसाल र चिनियाँ राजदूतबीच भेट, द्विपक्षीय चासो र...
कांग्रेसकाे क्रियाशील सदस्यता विवाद मिलाउन जुटे शीर्ष नेता
देउवा सरकारलाई तीन सांसदका तीन कुरा
गणतन्त्र आइसक्दा पनि साझा विदेश नीति बनाउन नसक्नु विडम्बना हाे...
कतारको नयाँ ‘ट्राभल गाइडलाइन’ : काेराेना खाेप लगाएकाे भए ...
‘माधव नेपाल पक्षले राखेकाे दाेस्राे अध्यक्षकाे प्रस्ताव स्वीकार्न...
तालिबान विद्रोही नेताहरू चीन भ्रमणमा
सरकारको आलोचना गर्दै आएका चीनका अर्बपति सनलाई १८ वर्ष जेल सजाय
इजरायल रोजगारी : अनलाइन आवेदन दिन समस्या भयो ? यसरी भर्नुहोस् फारम
अमेरिकाकाे अलास्कामा ८.२ रेक्टर स्केलकाे भूकम्प, सुनामीकाे चेतावनी
राज्यकाे अनावश्यक खर्च कटाएर दिगाे राेजगारी सिर्जना गर्नमा लगा...
साउन ८, २०७८ शुक्रबार
‘झोला र झण्डा नबोक्ने म परदेशीले देशमा काम पाउँछु त प्रधानमन्...
साउन १, २०७८ शुक्रबार
‘सरकारले परदेशीका समस्या पनि सुनोस् न !’
असार १८, २०७८ शुक्रबार